Wednesday April 29, 2020 - 16:55:43 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Khasaarihii ugu badnaa ayuu cudurka Covid19 ka geystay wadanka Mareykanka ee dhaca waqooyiga qaaradda ameerika, wararka ka imaanaya Mareykanka ayaa sheegaya in dhimshada uu caabuqan sababay ay ku dhowdahay 60 kun oo ruux american ah.
Saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in shalay oo kaliya ay 2,200 oo qof ay udhinteen caabuqa carona virus islamarkaana uu soo ritay dad ka badan 2,000 oo ruux.
Wararka ayaa intaas ku daraya in dhimashada guud ee Carona uu ka geystay mareykanka ay gaartay 59,000 ruux taas oo ka dhigan in tiradan ay ka badantahay askartii Mareykanka looga dilay dagaalkii Fiyatnaam oo cadadkoodu ahaa 58,220 oo askari.
dagaalkii mareykanku uu ka galay Fiyatnaam ayaa socday intii udhaxaysay sanadihii 1955 illaa 1975, sidoo kale dadka americanka ah ee labuko Carona Virus waxay gaartay hal malyan oo ruux.
Trump ayaa saadaashii ugu dambaysay ee uu sameeyay ku sheegay in dhimashada Carona uu ka geysan karo wadankiisa ay gaari karto 60K illaa 65K waxaana muuqata in daadaashaas ay waxba kama jiraan noqon doonto marka loo eego sida xowlliga ah ee cudurku dadka udilayo.
wadanka ingiriiska dhimashada ayaa gaartay 21,678 qof, Faransiiska shalay oo kaliya waxaa carona udhintay 367 qof halka dhimashada guud ay gaartay 23,660 ruux, R/wasaaraha faransiiska wuxuu sheegay in ay khafiifinayaan xaaladda bandowga ah inkastoo cudurku wali sii faafayo
Daawo Video: Alkataa'ib oo Filim kasoo saartay qaabkii loo qeybiyay Xoolaha Zakada ee Ariga iyo Lo'da.
Daawo Video: Alkataa'ib oo Filim kasoo saartay qaabkii loo qeybiyay Xoolaha Zakada Geela.